सभापतिले पार्टीको विधान मान्नुपर्दैन ?
प्रकाशमान सिंह, नेता नेपाली कांग्रेस
२०७४ माघ २५ बिहीबार ०९:४३:००
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह अहिले पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवाका कामको आलोचना गर्ने र विपक्षमा उभिने नेतामा पर्छन् ।
पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचकका रुपमा चिनिए पनि सत्ता हस्तान्तरणका बारेमा भने उनले देउवाको बचाउ गरे ।
उनले प्रक्रिया पुरा गरेर सत्ता हस्तान्तरण गरिने बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा विवकशील साझाका संयोजकसमेत रहेका रवीन्द्र मिश्रलाई पराजित गरेका सिँहसँग सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया, कांग्रेसको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा शिवनारायण गिरीले बुधबार गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
निर्वाचन सकिएको २ महिनामा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गरेको छैन, अब कहिले हस्तान्तरण हुन्छ ?
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संघीय संसदको संविधानले नै व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर नै संघीय संसद् बन्छ । हामी अहिले कस्तो खालको निर्वाचन प्रणालीमा छौं भन्ने कुरा बिर्सिएका छन् एकथरी मान्छेहरुले ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बिर्सिएका मान्छेहरुले १६५ को निर्वाचन हुनेबित्तिकै निर्वाचननै सकियो भन्ने हल्ला चलाएर निर्वाचन सकिसकेपछि पनि सरकारमा बसिरहेको छ कांग्रेस, सत्ता हस्तान्तरण गरेन भनिरहेका छन् । तर, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा छौं । १६५ को साथसाथै ११० पनि प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फबाट आउनुपर्नेछ ।
त्यो ११० को समानुपातिकको रिजल्ट आउनको लागि त्योभन्दा पहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ । किनभने हाम्रो संविधानअनुसार संघीय संसदमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिधिनित्व हुनुपर्छ । त्यो एक तिहाइको हिसाब मिलाउनको लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन जरुरी थियो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि सकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेपछि मात्रै पूरा हुने भएकाले सत्ता हस्तान्तरण नगरेको हो ।
त्यसकारण निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मात्र सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ । निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नै नभइकन सरकार गठन कसरी हुन्छ ? यो सरकारको जिम्मेवारी भनेको तीनवटा निर्वाचन गराउनु थियो । जसमा स्थानीय, प्रान्त र केन्द्रको हो । केन्द्रको पनि पूरा गर्नको लागि लागि राष्ट्रिय सभाको पनि हुनुपर्यो, प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको पनि प्रतनिधिनित्व हुनुपर्यो नि ? प्रक्रिया पूरा भएपछि नै सत्ता हस्तान्तरणको कुरा आउँछ । कसैलाई हतार हुँदैमा प्रक्रिया नै पूरा नगरी सत्ता हस्तान्तरण हुँदैन ।
प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्दैछ, सर्वसत्तावाद लाद्न सक्छ भनेर कांग्रेसले भनिरहेको छ । त्यो सम्भावना छ र ?
हो, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म एमाले र माओवादीको सरकार बन्दैछ । अब हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर उनीहरुले गर्ने राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको लागि खवरदारी गर्छौं । सत्तामा रहेकाहरुलाई ठीक बाटोमा हिँडाउनको लागि प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसकारण हामी अत्यन्तै सजग, सचेत भएर सबै विकासको योजनालाई अध्ययन गरी प्रभावकारी र उत्तरदायी भएर अघि बढ्छौं ।
एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकतामा कांग्रेस खेल्यो भन्ने आरोपहरु आइरहेका छन्, कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको हो ?
यस्तो गतिविधिमा मलाई केही जानकारी छैन । मैले प्रष्टसँग भन्दै आएको छु अब जनताको म्यान्डेटअनुसार कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ । कांग्रेसले अब पार्टीलाई सुधार गर्नुपर्छ । जनताको मन जित्नको लागि हाम्रो आदणीय नेता बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शम्शेरलगायतका संस्थापक नेताहरुले बनाएको पार्टी हो ।
पहिला उहाँहरुको नेतृत्वमा कांग्रेसको लोकप्रियता थियो । अब फेरि पहिलाको लोकप्रिय कांग्रेस बनाउनको लागि आवश्यक सुधार महत्वपूर्ण छ । अब कांग्रेसलाई संस्थागत रुपमा, नियम, र विधानसम्मत तरिकाले चलाउनुपर्छ । त्यसकारण जनताको कांग्रेस बन्नको लागि आफूमा भएका कमिकमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, यसबाहेक अरु केही छैनन् । माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ कसले गर्यो मलाई थाहा छैन । थाहा नभएको कुरा मैले कसरी भन्ने ?
अब जनताले चाहेको कांग्रेस बन्नको लागि के गर्नुपर्छ ?
मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु, अब जनताले चाहेको कांग्रेस बन्नको लागि १३ औं महाधिवेशनबाट जो पदाधिकारीहरु आउनुभएको छ । पार्टीकै विधानअनुसार उहाँहरु सभापतिदेखि लिएर विभिन्न पदमा बस्नेहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु पहिले विधानभित्र बस्नुपर्यो । सभापति बनिसकेपछि विधानले गाइड गरेपछि उहाँले काम गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? उहाँले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सकिएको २ महिनाभित्रमा केन्द्रका महामन्त्रीदेखि लिएर उपसभापति सबै पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने छ ।
तर, २ वर्ष हुन लागिसक्यो । विडम्बना, केही भएको छैन । जताततै पार्टी बेकामे भएको कारणले निर्वाचनमा जसरी रिजल्ट आउनुपर्ने हो त्यसरी आएन । निर्वाचनमा पार्टी इनएक्टिभ भयो । पार्टीको विधानअनुसार गर्नुपर्ने कामहरु भएनन् । पार्टीको ४२ ÷ ४३ विभागहरु बनाउनुपर्नेछ । तर, ती विभागहरु अहिलेसम्म पनि बन्न सकिरहेका छैनन् । हाम्रो विधानले नै उपसभापतिको संयोजकत्वमा केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण विभाग हुने भएकाले पार्टी अहिले चलायमान हुन सकेको छैन ।
ठप्प छ । पार्टी गतिशील भएको भए यो भन्दा राम्रो परिणाम आउने थियो ।
अब कांग्रेसको नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, निर्वाचनमा पार्टी नेतृत्व असफल भयो । मैले पार्टीभित्र विगतदेखि नै भन्दै आएको छु ।